Ny mpampihavana no atao hoe zanak’Andriamanitra
"Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak'Andriamanitra." — Mat. 5:9.
I Kristy no "Andrianan'ny Fiadanana", ary Izy no iraka hamerina ety ambonin'ny tany sy any an-danitra ny fiadanana izay noravan'ny fahotana. "Koa satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin´Andriamanitra amin 'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika." Na iza na iza vonona hiaiky ny fahotany ka manokatra ny fony amin'ny fitiavan'i Kristy dia tonga mpandray anjara amin'io fiadanan'ny lanitra io. [...]
Ny fahasoavan'i Kristy raisina ao am-po, no mandresy ny fandrafiana sy manafoana ny fifandonana ary mameno ny fanahy amin'ny fitiavana. Izay mihavana amin'Andriamanitra sy ny namany dia tsy ho fadiranovana. Tsy hisy fialonana ao am-pony; tsy hahitana fanirian-dratsy; tsy hisy ny fankahalana. Ny fo izay mifankazatra amin'Andriamanitra dia mpiray amin'ny fiadanan'ny lanitra, ka hizara ny hery miasa mangina avy aminy ary mitondra fitahiana eo amin'ny manodidina rehetra. Ny fanahin'ny fiadanana dia hitoetra toy ny ando eo amin'ny fo trotraka sy reraky ny adilahy eo amin'izao tontolo izao.
Irahina eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny hafa-piadanana ny mpanara-dia an'i Kristy. Na iza na iza, amin'ny alalan'ny hery mahataona misoko mangina sy tsy ampoizina avy amin'ny fiainana masina, dia haneho ny fitiavan'i Kristy; na iza na iza, amin'ny alalan'ny teny na ny asa, hitarika ny hafa hiaiky ny fahotany sy hamboraka ny fony eo amin'Andriamanitra, dia mpampihavana.
Ary "sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak'Andriamanitra." Tena zava-misy ny fanahin'ny fiadanana noho ny fifandraisany amin'ny lanitra. Manodidina azy ny fofo-manitry ny fahamendrehan'i Kristy. Ny hanitry ny fiainana, ny toetra malemy fanahy dia maneho amin'izao tontolo izao fa zanak'Andriamanitra izy. Fantatry ny olona fa efa niaraka tamin'i Jesôsy izy. [...] — TFMB, 47,48